रोचक जानकारी – Page5– MeroJilla.com
आँखा झिम्क्याएको आरोपमा अभिनेत्री प्रिया प्रकाशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमाम मुद्दा दायर Sunday, April 15th, 2018
एजेन्सी । आँखा झिम्क्याएर रातारात चर्चामा अाएकी मलायलम अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर त्यही अाँखा झिम्क्याएकै कारण समस्यामा परेकी छिन् । नेसनल क्रसको रुपमा चिनिएकी प्रियाविरूद्ध अाँखा झिम्क्याएकाे अाराेपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ।हाइदरावादका दुईवटा पार्टीले उनको विरुद्ध सर्वोच्चमा निवदेन दर्ता गराएका हुन्। इस्लाम धर्ममा आँखा झिम्क्याउनु धर्मविपरित..
फ्रान्सिस व्युकानन-हयामिल्टन Saturday, March 31st, 2018
नेपालमा व्युकानन-हयामिल्टन र उनको टोलीले संकलन गरेको बिरुवा सुनाखरी (डेंड्रोब्रियम डेंसिफ्लोरम) को हर्बेरियम नमुना आज भन्दा झण्डै २१६ वर्ष अघि एकजना स्कटिश चिकित्सक भारतको कलकत्ता शहरबाट एउटा टोलीसँगै नेपाल प्रस्थान गरे। एक महिनाभन्दा लामो पैदल यात्रा पछि उनीहरु काठमाडौं पुगे । भारत त्यसबेला ब्रिटिश शासन अन्तर्गत थियो। कलकत्तास्थित गभर्नर जनरलको आदेश पछि ४० वर्षीय..
नागरिकता पाउने पहिलो रोबट ‘सोफिया’ले नेपाल आएर यसो भनिन् Wednesday, March 21st, 2018
काठमाडौँ — चर्चाको शिखरमा रहेकी सेलेब्रिटी रोबोट ‘सोफिया’ ले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा प्रविधिले गरिबी हटाउन सहयोग पुर्‍याउने बताएकी छन् । बुधबार राजधानीमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक सेवाका लागि प्रविधि’ विषयक सम्मेलनमा उनले प्रविधिको प्रयोगले सुशासन कायम राखी भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउने सक्ने बताइन् । नेपालमा प्रविधिको..
यस्तो भन्छ अध्ययन -मृत्यु हुनुभन्दा अघि मानिसको दिमागमा कस्ता कुरा आउँछन् ?
काठमाडौँ । मृत्यु कसैको वशमा छैन । हरेक प्राणीहरु नचाहेरै जन्मन्छन् र अन्त्यमा नचाहेरै मर्छन् । मृत्युका बारेमा सामान्य आँकलन भएपनि मानिस कति बेला मर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै जटिल प्रश्न हो । हाम्रो शरीरले मृत्यु हुने बेला कस्ता कस्ता लक्षण देखाउँ। यो कुरामा वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि भएको छ । मानिस मृत्युका बारेमा जानकार भयो भने उ अझ बढी निराश बन्ने भएकोले वैज्ञानिकहरुले..
चर्चामा इन्टरनेट तहल्का मच्चाएकी प्रिया प्रकाश Tuesday, March 20th, 2018
एजेन्सी। आफ्नो फरक अन्जादका कारण इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाउन सफल प्रिया प्रकाश फेरि एक पटक चर्चामा शिखरमा छिन्। प्रियाले पहिलो पटक फोटो शुट गराएकी छन्। जसमा उनी पिंक कलरको ड्रेसमा देखिएकी छन्। उनले आफ्नो इंस्टाग्राम एकाउन्टमा फोटो शेयर गरेकी छन्। प्रिया प्रकाशले आफ्ना फोटा इंस्टाग्राममा शेयर गर्ने वित्तिकै ती फोटोलाई मानिसहरुले मन पराएका छन्। २४ घण्टामा उनको फोटोमा..
मिर्गौला बिग्रिए के गर्ने ? Friday, March 9th, 2018
चिनीरोग र उच्च रक्तचापले मिर्गौला खराब गर्न सहयोगी भूमिका खेल्छ । त्यसैले यसबाट बच्न पनि सावधानीको जरुरत पर्छ । मिर्गौलामा इन्फेक्सन भएको अवस्थामा पनि दुवै मिर्गौला बिग्रने सम्भावना हुन्छ । खासगरी पिसाब वा मिर्गौलामा भएका विभिन्न समस्याले इन्फेक्सन हुने गर्छ । कतिपय ब्याक्टेरियाका कारण पनि इन्फेक्सन हुने गर्छ । पानी कम खाने, पिसाब रोक्ने, मधुमेहका रोगी, महिला मिर्गौला..
तपाईंलाई थाहा छ नितम्ब ठूलो हुनुको अर्थ ? Wednesday, March 7th, 2018
काठमाडौं । एक नयाँ अनुसन्धानका अनुसार जसको तौलको ठिक छ तर नितम्ब, जाँघ र खुट्टामा धेरै बोसो जमेको छ भने उनीहरुमा स्ट्रोक, मधुमेह र हृदयघातको आशंका कम हुन्छ । सेल रिसर्च जर्नलमा यो अनुसन्धान छापिएको छ । उक्त अनुससन्धान अनुसार जो मानिसहरुको शरिरको तल्लो भागमा बोसो कम हुन्छ उनीहरुमा हृदयरोग र मृत्युको आशंका बढि हुन्छ । यद्यपी, यो शोध मोटोघाटो मानिसहरुमा लागू छैन । यसको कारण..
We Can Do फेसबुक ग्रुप समाजिक काममा Tuesday, March 6th, 2018
रामकृष्ण लामिछानेपर्वत । पछिल्ला दिनमा सामाजिक संजालको प्रयोग बिभिन्न उद्दश्यको छ ।कसैले साथीसंग सम्पर्कमा रहन,कसैले मनोञ्जन लिन,कसैले जानकारी दिन र लिन प्रयोग गर्छन । समाजमा क्लव,समुह,संस्था लगायत छन ।फेसवुकको सकरात्मक र नकरात्मक प्रयोग दिनहुँ पाईन्छ । यहाँ फेसबुक मार्फत सुरु भएको ग्रुप उई क्यान डु ‘सहयोगी हातहरु’ पनि समाजमा आउने प्रयासमा छ ।..
प्रेमका ४ तह Tuesday, February 27th, 2018
प्रत्येक प्राणीभित्र रहेको नदेखिने तर एकअर्कासँग नजिक हुने कारक तत्व हो प्रेम । प्रेम छ त्यसकारण हामी छौं । कसैको प्रेमकै कारण हामी जन्मिएका हौं र सारा ब्रह्माण्ड प्रेमको एउटा अनन्त शृङ्खला हो । यदि जीवनमा रस छ भने त्यो पनि प्रेमकै कारण हो र प्रेमकै कारण जीवन जिउनुको मज्जा भएको हो । बुबा–आमासँग, श्रीमान–श्रीमती, साथी–भाइ अथवा कसैलाई खेलकुदसँग प्रेम छ, कसैलाई लेखनसँग प्रेम छ,..
यस्ता थिए प्राचिनकालका ७ अनौठा सेक्स प्रथा Saturday, February 24th, 2018
हामीमध्ये धेरैजसो वर्तमान समयको ‘सेक्स ट्रेन्ड्स’ अर्थात् यौन प्रथाबारे जानकार छौं होला । तर धेरैलाई थाहा नहोला, सेक्सको अनौठो प्रथा शताब्दीऔँ पहिलेदेखि थियो । जान्नुहोस्, ती ७ अनौठो प्रथा बारे । १ लिपिस्टक र ओरल सेक्स (मुख मैथुन) प्राचीन इजिप्टमा लिपिस्टिक लगाउनुको अर्थ तपाई ओरल सेक्सका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो । बिशेषगरी, इजिप्टका दरबारी यौनकर्मी आफ्नो ओरल..